Ama-Oasis Hacks wokugcina 🥇 Aphambe, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
OASIS IZIKHALALEKILE EZIKHONA
Finyelela kuwo wonke ama-Oasis Hacks amahle kakhulu lapha ku-Gamepron! Sinikeza i-Oasis Aimbot, i-ESP / iWall Hack, i-NoRecoil, nokunye okuningi! Wina okuningi ngamathuluzi atholakalayo lapha.
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngaphambi kokuthi uthenge ama-Oasis hacks ethu, qiniseka ukuthi ithuluzi ofuna ukulithenga lisanda kuvuselelwa noma lisasebenza ku-inthanethi. Ngenkathi sihlala sibuyekeza amathuluzi ethu, kukhona ukubambezeleka kwesikhathi sokulethwa kwezinye izimo; ngenkathi kuvame ukushesha, kungathatha futhi amahora ambalwa. Onke amathuluzi ethu akhiyiwe nge-HWID, okusho ukuthi ungawasebenzisa kuphela kukhompyutha eyodwa - qiniseka ukuthi ikhompyutha yakho iyahambisana nawo wonke amathuluzi ethu ngaphambili. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzonikezwa uma usubonile ukhiye womkhiqizo!
Okukhethiwe kwethu Oasis Hacks
Oasis Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks nokuningi
Thenga Oasis Hacks in 4 izinyathelo
Khetha umdlalo ongathanda ukuwuthenga kusuka ekukhetheni kwethu okubanzi kwezihloko
Khetha i-hack evumelana nezidingo zakho ngokuphelele, njengoba sinezinto eziningi ezahlukahlukene okufanele sizicabangele
Yenza inkokhelo yakho usebenzisa iprosesa yethu yokukhokha etholakala kuphela (futhi iphephe ngokumangalisayo!) Evela ku-Gamepron.
Finyelela Ukhiye Wakho & Landa ama-Oasis Hacks!
Thola ukufinyelela kukhiye wakho womkhiqizo bese ulanda ama-hacks owadingayo ukuze ubuse umncintiswano!
Kungani Usebenzisa i-Gamepron Oasis Hacks?
Imidlalo yokusinda yenzelwe ukuvivinya amandla akho nentando yakho, futhi neLast Oasis ayihlukile. Ukusebenzisa i-Oasis Hacks yethu kuzokwenza inqubo yokusinda ibe lula, kepha kanjani? Kunezinsongo eziningi okufanele ukhathazeke ngazo ngenkathi udlala, nokuthi ngabe uya wedwa noma nabalingani abambalwa, izingqinamba uzohlangabezana nenselelo kungekudala. Njengoba i-PvP (Player Versus Player) iyingxenye ebalulekile yalo mdlalo, uzofuna inzuzo lapho kungenzeka khona. Uma uhlangabezana nabadlali abebe “lola izinkemba zabo” izinyanga, kuba sengathi awunathemba. Lapho abadlali abangenathemba bevula i-Last Oasis, bathola umuzwa owesabekayo onganqotshwa kuphela ngokusebenzisa ama-Oasis Hacks ethu! Singakusiza ukuthi ufinyelele kuma-Oasis Hacks amahle kakhulu atholakala emakethe, konke okumele ukwenze ukuthenga ukhiye womkhiqizo kwaGamepron.
Asihambi ngendlela yendabuko iningi labanye onjiniyela bokugenca eliba yisisulu sayo. Bafuna nje ukukhipha amathuluzi ngokushesha okukhulu, baphendulele inzuzo enqubweni - I-Gamepron igxile kakhulu ekwakheni amathuluzi we-premium azokuma ukuhlolwa kwesikhathi. Uma ufuna ukwazi ukuthi imali yakho isetshenziswa endaweni efanele, ukuthenga wonke ama-hacks akho lapha eGamepron kuzogcina ingqondo yakho inokuthula.
Wake walisebenzisa ithuluzi lamahhala esikhathini esedlule ku-Last Oasis? Noma bekungomunye umdlalo, amathuluzi wamahhala awakwazi ukuqhathanisa namandla atholakala lapha eGamepron. Zonke izici esizifakile ngaphakathi kwe-Oasis Hack yethu zenzelwe ukwenza ukuwina kube lula, noma ngabe unekhono elingakanani njengomdlali. Ingane encane ingahlala phambi kwekhompyutha yakho nge-Oasis Hacks yethu inikwe amandla futhi yenze umonakalo othile, siyathembisa! Lokho nje kungubufakazi bokuthi amathuluzi esiwakhayo angaba namandla kangakanani.
Manje njengoba usuqonda ikhwalithi okufanele sinikele ngayo, ulindeni? Thenga ukhiye womkhiqizo namuhla bese ufinyelela ngaphandle kokungabaza ama-Oasis Cheats amahle kakhulu kuwebhu! Silungele ukusebenzela noma ngubani odinga usizo, noma ngabe ufuna ukugenca okokuqala ngqa. Akukho ukucwaswa okwenzekayo lapha, njengoba sikwazi ukusiza abadlali bawo wonke amazinga wamakhono - lapho uzizwa sengathi sekuyisikhathi sokucela usizo oluthile, khumbula nje ukuthi iGamepron iyindlela # 1 online.
I-Oasis Wall Hack (ESP)
Imininingwane ye-Oasis Player ESP (Igama, imigoqo yezempilo, ibanga)
I-Oasis Item ESP enezihlungi
Isexwayiso sesitha se-Oasis
Imodi ye-Oasis super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza).
Oasis bone & aim ukhiye okulungisekayo.
Isinxephezelo se-Oasis Recoil
Impela Oasis Hack Izici
Sebenzisa i-Oasis Player ESP yethu ukuthola inzuzo enkulu ngesikhathi sezimpi ze-PvP, njengoba uhlala ubona amamodeli esitha ngokusebenzisa izindawo eziqinile / ezi-opaque
Ngeke nje ukwazi ukubona amamodeli wesidlali ngezindonga, kepha futhi ungabona imininingwane ewusizo (njengamagama abo, ezempilo, ngisho nebanga).
Emdlalweni wokusinda njengokuphanga kwe-Oasis kubalulekile, yingakho ukusebenzisa i-Item ESP yethu enezihlungi ukuthola izinto ezinhle kulungile.
Inhloso yakho izobulala njengakuqala lapho ukhetha ukusebenzisa i-Oasis Aimbot yethu! Izibhamu zizonqotshwa ngokushesha.
Ithrekhi ye-Oasis Bullet (esebenza ngamabanga amafushane naphakathi)
Ilungele kokubili ibanga elifushane naphakathi, ungasebenzisa isici se-Oasis Bullet Track ukugcina ithrekhi yamashothi akho.
Isici sezexwayiso sizokwazisa uma isitha siseduze noma sikuhlose usebenzisa umlayezo osesikrinini wangokwezifiso.
Imodi ye-Oasis super jump (akukho monakalo wokuwa lapho yenziwe yasebenza)
Ukufa ekulimaleni kokuwa kuyinto yesikhathi esedlule lapho usebenzisa i-Gamepron. Nika amandla i-Super Jump Mode futhi uthathe indiza, ngoba umonakalo wokuwa awusekho.
Oasis bone & aim ukhiye okulungisekayo
I-Oasis Aimbot ifakwe izinketho ezahlukahlukene ezilungisekayo, ezinjenge-Bone Prioritization nezinye eziningi.
Ukuhlolwa okubonakalayo kwe-Oasis aimbot
Ukusebenzisa i-Oasis Aimbot yethu kuzokuvumela futhi ukuthi usebenzise umsebenzi we-Visible Checks ukuthola ukuthi isibhamu sakho sishaya kuphi kumphikisi.
Sebenzisa i-Recoil Compensator etholakala ku-Oasis Hack yethu ukugwema ubukhona obucasulayo bokubuyisa ngesikhathi sezibhamu ezinkulu.
Yiba Umdlali Ohamba phambili Wezinganekwane ze-Oasis ePlanethi
Kuthatha uhlobo olwehlukile lomdlali we-gamer ukuya e-Oasis ngaphandle kwanoma yimaphi amathuluzi, ngoba kuzoba ukugaya okucindezela ingqondo okungonakaliswa ngabadabukisayo kanye nama-troll ngomzuzwana. Noma ngabe ufuna ukuba yilo troll noma ukuletha ubulungiswa obushesha ngokuphelele kuya kumdlali, kepha yazi nje ukuthi i-Gamepron inayo yonke i-Oasis Hacks okudingeka uyenze. Yiba umdlali we-Oasis ongcono kakhulu ngama-Oasis cheats ethu!
Ama-Oasis Hacks aPhezulu namaKopela
I-Oasis ESP neWallhack
Amanye ama-Oasis Hacks nokukhohlisa
I-Gamepron inikezelwe ukuletha abasebenzisi bethu ama-Oasis Hacks asebenza kahle kakhulu futhi asebenza kahle atholakala ku-inthanethi, njengoba besingathanda ukukhipha elinye ithuluzi. Lokhu kusho ukuthi uzoba nethuba lokuzuza kuma-Oasis Hacks Cheats athandwa kakhulu ngokuthenga ukhiye womkhiqizo ngqo ku-Gamepron. Noma sihlakulela amathuluzi noma sikuxhumanisa nomunye wozakwethu abaqeqeshiwe nabaqinisekisiwe, njalo uzonikezwa ukufinyelela kuma-Oasis Hacks aholayo atholakala kuwebhu. Sifake i-Oasis Aimbot lapha eGamepron ekuvumela ukuthi ukhombe izingxenye ezithile zomphikisi wakho nge-Bone Prioritization, noma uvele uziqede usebenzisa i-Instant Kill.
Olunye uhlelokumangalisa lwezici okufanele ucatshangelwe kuzoba yizinketho zeFootprints and High Damage, zombili ezizokwenza ukulandelela nokubulala izitha zakho kube nomoya. Uma ufuna ukuthuthuka futhi uphile isikhathi eside e-Oasis, inzuzo yamathuluzi wethu kufanele icace.
Nakanjani uzobangcono uma une-Oasis Aimbot yethu inikwe amandla, lokho singakuqinisekisa. Hhayi nje kuphela ukuthi ungaba yinkosi ye-Oasis ngokuthola ukufinyelela kokuphamba kwethu, kepha ungakwenza ngaphandle kokukhathazeka - awusoze wafa ngesikhathi sokudutshulwa futhi lapho i-Oasis Aimbot yethu inikwe amandla. Ngokubekwa phambili kwamathambo kukuvumela ukuthi ukhombe lapho ufuna ukudubula khona futhi unakekele i-Auto-Aim / Fire yenqubo yakho, konke okumele ukwenze ukuhlala phansi uphumule. I-Oasis Aimbot izokwenzela wonke umsebenzi, futhi uma lokho kungazwakali “kumnandi”, kunokuningi ongakhetha kukho okulungisekayo okungashintshwa ukukunikeza umuzwa omuhle kakhulu.
Ukusebenzisa i-Oasis Aimbot yethu kuzokuvumela futhi ukuthi usebenzise isici se-Instant Kill, esizobulala noma ngubani omkhombe khona manjalo. Ngeke uze ubanikeze nethuba lokuzivikela, okulungele wena - lokho kusho ukuthi amathuba okuthi uphumelele maningi kakhulu
Sinikeza i-Oasis ESP neWall Hack esezingeni eliphakeme kakhulu lapha eGamepron, futhi lokho kungenxa yokuthi udinga ukuthola inzuzo enkulu kunazo zonke emdlalweni wokusinda walolu hlobo. Izitha zakho zizokwenza konke okusemandleni azo ukuze ziqhubekele phambili, okubandakanya ukusebenzisa amathuluzi e-Oasis ESP neWall Hack ukuthola ukuthi ucashe kuphi. Yilwa ne-Oasis ESP yakho ewusizo! Ungabona amathambo omdlali ngezindonga, kepha kukhona inqwaba yezinye izinketho ze-ESP (Extra Sensory Perception) ongakhetha kuzo. Ungabona igama lomdlali, kanye nokuthi basele nempilo engakanani ngisho nebanga labo! Ukusebenzisa i-Item ESP ngezihlungi kukuvumela ukuthi uphange ngokushesha, njengoba ukwazi ukuthola ukuthi izinto ezinhle zikuphi ngokusebenzisa amathuluzi ethu. Akunasidingo sokuchitha isikhathi esithe xaxa uthatha imfucumfucu engenamsebenzi, njengoba i-Oasis ESP yethu izokukhomba endaweni efanele.
Enye into emangalisayo ama-Oasis Hacks amaningi angayisebenzisi kungaba isici se-Footprints. Ungasebenzisa isici seFootprints ukugcina umkhondo wezitha eziseduze nawe, zikunike ithuba lokucathamela izithunzi bese ushaya uma isikhathi silungile. Ukuhlela ukuqamekela nokusetha izingibe ezingaba khona kulula uma unezinyathelo ezikuqondisayo esitheni, lokhu kuzwakala kuyiqiniso ikakhulukazi uma unikwe amandla nebanga le-Distance. Ngeke nje uthwebe abaphikisi, kepha uzokwazi ukuthi basondele kangakanani ngaphezu kwalokho! Njengoba igama lingasikisela, isici sethu Sokulimaza Okuphezulu sisebenza kahle kulabo abangafuni ukuzijabulisa ngesikhathi kuqhuma isibhamu. Ukudubula ngakunye okwenzayo kuzoba namandla kakhulu kunezitha zakho, noma ngabe zisebenzisa ziphi izikhali.
Ungadlala indawo yombulali we-bonafide nge-Footprint yethu, Ukulimala Okuphakeme, nezici zebanga ezinikwe amandla - ngakho-ke ulindeni?
Kunezinye izinto eziningana okufanele uzicabangele uma kukhulunywa ngama-Oasis Hacks wethu nama-Cheats, konke okuzokusiza ukuthi ube ngumdlali ongcono. Ngenkathi abanye abantu benqaba ukuzisebenzisela ukukopela, ungabanyathelisa ekuthumeleni! Ngazo zonke izici ezimangalisayo esikhulume ngazo kuze kube manje, kusekhona ukuthanda umsebenzi we-2D Radar kanye Nezexwayiso okufanele uzicabangele - sengathi lokho bekunganele, futhi sinemodi ye-Super Jump ezokusiza gwema ukulimala kokuwa (noma ngabe uwe kangakanani). Awufuni ukuthi yonke inqubekela phambili yakho ilahleke ngenxa yokugenca kwekhwalithi ephansi okunganikeli ngokuvikelwa kokukopela, okungesinye isici esikhona lapha eGamepron.
Onke amathuluzi wethu awatholakali ngo-100%, okusho ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokuthi ama-akhawunti akho azovinjelwa. Abaduni bangalindela ukubhekana nokuvinjelwa unomphela ngesikhathi esithile lapho bekopela, kepha hhayi ngeGamepron!
Ama-Oasis Hacks Imibuzo
Kungani ama-Oasis Hacks ethu
Lapho uthenga ama-Oasis Hacks kwaGamepron awuzukunikwa nje ithuluzi lokushoda, njengoba sihlala sigxile kwikhwalithi yakho konke ukukhishwa. Sinikeza ama-hacks afakwe ngokuphelele azokusiza ukuthi uwine imidlalo eminingi, noma ngabe unekhono kangakanani - yingakho kufanele ubeke ukholo lwakho kuma-Oasis Hacks ethu! Le yinkonzo etholakalayo kuphela, ngakho-ke thatha isinyathelo ngokushesha.
Kungani i-Oasis Aimbot yethu
I-Oasis uhlobo lomdlalo oluzoklomelisa ukufaka komsebenzisi ezimweni eziningi, okwenza ukunemba kwakho kube ucezu olubaluleke kakhulu lwephazili. Ngeke uphuthelwe okunye ukudutshulwa lapho i-Oasis Aimbot yethu inikwe amandla, futhi lokho kuzohumushela empumelelweni ethe xaxa ngenkathi udlala lo mdlalo (njengokungathi lokho bekungabonakali). Ukulwa nezibhamu akusasikhuthazi, njengoba usuyazi ukuthi uzowina.
Kungani i-Oasis ESP yethu
I-Oasis ngumdlalo wokusinda ozokubiza ukuthi uphange ngesikhathi esithile, okusho ukuthi kuzoba nezinto eziningi "ezingenamsoco" okufanele uzicabangele ukugwema. Uma ufuna ukugxila kuphela ngempango enhle kakhulu, ungasebenzisa i-Oasis Item ESP yethu ngezihlungi ukubuka izakhiwo ngaphambi kwesikhathi - ukukusindisa isikhathi esiningi kule nqubo.
Kungani i-Oasis Wallhack yethu
Ama-Oasis Hacks azohluka ngekhwalithi, kepha hhayi ngeGamepron. I-Oasis Wall Hack yethu izodlala ikhwalithi efanayo etholakala kuwo wonke amanye amathuluzi wethu e-Oasis, okusho ukuthi uzokwazi ukuzibona zombili izinsongo nezinto eziwusizo ngokushesha. Ungakushiyi kube sethubeni bese usebenzisa i-Oasis Wall Hack yethu ukubona ukuthi yini engakolunye uhlangothi!
Kungani i-Oasis Norecoil yethu
Yonke inhlamvu ibalwa kumdlalo ofana ne-Oasis, yingakho ukusebenzisa i-Oasis NoRecoil Hack yethu kuzokusebenzela izimangaliso. Ukusebenzisa leli thuluzi kukuvumela ukuthi ube nesibhamu esinembe kakhulu, okusho ukuthi izitha ngeke zibe sethubeni lapho zizongena uzwane nawe. Uma ufuna ukubeka intando yakho kubantu, isici se-Oasis NoRecoil siyindlela enhle yokwenza lokho.
Ungawalanda kanjani ama-Oasis hacks amahle kakhulu?
Onke ama-Oasis Hacks amahle kakhulu angalandwa khona lapha eGamepron. Uma usukhokhele ukhiye wakho womkhiqizo, ungasetshenziswa ukufinyelela kuma-Oasis Hacks ethu (kuya ngokuthi uyiphi ikhi yomkhiqizo oyithengayo). Ungangena kuwo wonke ama-hacks amahle kakhulu njenge-Oasis Aimbot, i-ESP, iWall Hack, neNoRecoil usebenzisa i-Gamepron.
Kungani ama-Oasis Hacks wakho ebiza kakhulu kunamanye
Isibhakabhaka siwumkhawulo lapho ukhetha ukugenca ngeGamepron, njengoba ama-Oasis Hacks ethu engafaniswa uma kukhulunywa ngekhwalithi. Onke amathuluzi ethu afakwe ngokugcwele futhi ahlala engatholakali ngo-100% ngenkathi esetshenziswa, ngakho-ke wonke ama-akhawunti akho aphephile nathi! Isevisi yethu inikezwa ngesisekelo esilinganiselwe futhi njengoba kunenombolo eqinile yezintambo ezitholakalayo ekukopeleni ngakunye.
Akudingeki ukuthi ulume ngaphezu kwalokho ongakuhlafuna usebenzisa i-Gamepron, njengoba sinikeza okhiye bomkhiqizo nsuku zonke, masonto onke, nanyanga zonke. Ukungafani kwezinto kuyisici esiyinhloko senkonzo yethu lapha, futhi yingakho abasebenzisi bezimisele ukubuyela kithi ngazo zonke izidingo zabo ze-Oasis Hack! Unokufinyelela okungenamkhawulo ku-hack ngenkathi ukhiye wakho womkhiqizo usebenza, ngakho-ke zizwe ukhululekile ukugebenga ngendlela ongathanda ngayo.
Awesome Oasis Hack Izici